MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE LOO YAQAAN 'SPRINGERDOODLE DOG' IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee loo yaqaan 'Springerdoodle Dog' iyo Sawirro
Ingiriisiga Xilliga Xilliga Gu'ga ee Isbaanishka / Poodle eeyaha Isku Darka ah
Ferris the Springerdoodle markuu jiray 2 sano
Xilliga Jiilaalka 'Springerpoo'
Springerdoodle maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Ingiriisi Springer Spaniel iyo Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Springerdoodle
Diiwaangeliyaha Taranka Nashqadeeyaha 'Springerdoodle Retriever'
Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynka Naadiga = Springerdoodle Retriever
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Springerdoodle
Reba shukulaatada iyo White Springerdoodle markay jiraan 2 sano
Reba shukulaatada iyo Springerdoodle cad oo lagu qaaday 5 bilood jir— 'Hooyadeed waa madow iyo caddaan Ingiriisi Springer Spaniel aabahana waa madow Poodle madow. Waxay leeyihiin jubbado qurxoon, jilicsan, oo ruxruxsan, waxayna u muuqdaan inay daadin doonaan wax ka yar qaar ka mid ah Doodleyaasha kale. ' Lahaanshaha sawirka Old Mcdoodle Farm ee Bartamaha FL
Reba shukulaatada iyo Springerdoodle cad oo halkaan lagu muujiyey 5 bilood jir, waxaa iska leh sawirka Old Mcdoodle Farm
Reba shukulaatada iyo White Springerdoodle markay jiraan 7 toddobaad. Lahaanshaha sawirka Old Mcdoodle Farm
'Maggie the Mini Springerdoodle waa afar bilood jir. Aad ayey u hooseysaa - daadinta.
Kani waa nooca loo yaqaan 'Springerdoodle' loo yaqaan 'Rudy'. Waxaan ka soo samatabbixinay hoy uu deegaanka ka deganaa. Isagu waa 1 1/2 sano jir waana 'qosolka' qoyska. Wuxuu leeyahay dareen kaftan badan markastana wuu naga qosliyaa. Isagu waa macaan yahay, saaxiibtinimo leeyahay (dadka iyo xayawaanka oo dhan), kalgacal badan oo aad u jilicsan. Wuxuu leeyahay shakhsiyad cabsi badan. Isagu waa tamar badan yahay waana u baahan socod maalinle ah . Wuxuu caan ku yahay dumarka xafiiskayaga caafimaadka iyo dumarka bangiga maxalliga ah. Sidoo kale, dadka xaafaddayada badankood way yaqaanaan oo jecelyihiin Rudy! '
Ferris the Springerdoodle eey 10 asbuuc jir ah –Tani waa Ferris! Hooyadiis waa Ingiriisi Springer Spaniel aabihiisna waa a Standard Poodle . Waa inuu ahaadaa qiyaastii 35-40 rodol markii uu weynaanayo. Waan arki doonnaa-hooyadiis way yarayd oo 16 inji oo dherer ah, taas oo ku yar caadka. '
Ferris madow oo leh cad cad Springerdoodle ee 10 toddobaad jir
'Kani waa Zippy, Sproodle / Springerdoodle oo afar bilood jir ah. Aabihiis waa cadaan Poodle Guntin halka hooyadiis ay tahay tanto iyo cadaan Ingiriisi Springer Spaniel . Waxaan ku nool nahay Wales, UK, halkaas oo Zippy uu jecel yahay inuu ku ordo buuraha daba socda shimbiraha waligiis ma qabto !! Isagu waa eey caqli badan, kaas oo ka dhigay dhammaan dhinacyada tababarka aad u fudud. Qalabaynta guryaha wuxuu ahaa mid deg deg ah, adeecidiisuna waa mid aad u fiican marka loo eego da'diisa. Isagu waa nin saaxiibtinimo badan oo carruurta jecel. Wuxuu noqday xubin qoys oo aad loo jecelyahay. '
Shukulaatada shukulaatada leh Springerdoodle cad oo jira 11 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo ah 'Springerdoodle'
Sawirada Springerdoodle 1
Liistada eeyaha Guga Isbaanishka Isbaanishka Isbaanishka ah
8 bilood oo buluug ah sanka bulxan
stern bernard iskudhafka wax ku oolka ah ee iibka ah
eyda waxay ku bilaabmaan s
5 bilood jir labrador retriever
basset hound rottweiler mix puppy (dhalada yaryar)